राजीनामा होइन, असन्तुष्टिमात्र हो : मेयर सरावगी :: PahiloPost
राजीनामा होइन, असन्तुष्टिमात्र हो : मेयर सरावगी
14th September 2018, 05:45 pm | २९ भदौ २०७५
प्रदेश २ को एक मात्र महानगरपालिका वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले पार्टीबाट राजीनामा दिएको भन्दै शुक्रबार दिनभरी चर्चाको विषय बन्यो। संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट मेयरमा चुनाव जितेका सरावगीलाई पार्टीले स्पष्टिकरण सोधेपछि राजीनामा दिएको चर्चा चल्यो। के हो त सत्य? पहिलोपोस्टका बीपी साहले मेयर सरावगीसँग गरेको कुराकानी।
० तपाईँले राजीनामा दिनुभएको हो?
होइन, मैले राजीनामा दिएको छैन। पार्टीभित्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छु। त्यो सबै पार्टीमा हुन्छ। मैले पनि अध्यक्षसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छु। पार्टीको रवैया र यहाँको अवस्था हेरेर म असन्तुष्टि व्यक्त गर्न बाध्य भएको हुँ। राजीनामा दिएको छैन र कुनै पार्टीमा जाने हल्ला पनि निराधार हो।
० तपाईँमाथि दबाब आएर यस्तो गर्नुभएको हो?
एउटा मेयरमाथि दबाब आउनु स्वभाविकै हो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयरलाई दबाब आउनु ठूलो कुरा होइन। कहिले पार्टी कार्यकर्ताको दबाब, कहिले सर्वसाधारणको दबाब। तर राजीनामा नै दिनु पर्ने दबाब आएको होइन। मैले यति मात्र भनेको छु कि यस किसिमको दबाब आइरह्यो भने म पार्टीबाट निस्क्रिय हुन बाध्य हुनेछु।
० त्यसो भए असन्तुष्टि के विषयमा छ त?
कुनै पनि संगठन नियममा चल्नु पर्छ तर यहाँ केही साथीहरुले आफ्नैलाई दबाब दिन खोजेपछि मैले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हुँ। मैले पार्टी र संगठनलाई नियममा चलाउन खोजेको छु। जसले पायो त्यसले निर्देशन दिने, काममा अवरोध गर्ने, यो गर त्यो गर भन्ने कुराले मलाई चित्त दुखेको छ।
० तपाईँलाई अनुशासन समितिले स्पष्टिकरण सोधेपछि राजीनामा दिएको कुरा तपाईँकै पार्टीबाट आयो नि?
मलाई कुनै स्पष्टिकरण सोधिएको छैन। कुनै कुरामा कमिकमजोरी भएको छ भने त्यो पार्टी अध्यक्ष वा सम्बन्धित निकायबाट आउनु पर्ने हो। तर यहाँ केही साथीहरुले बीचमै चलखेल गर्न खोजे। जो कुरा मलाई पटक्कै मन परेन।
केही साथीहरुले मेरो काम कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्न खोजेका छन्। यस्तो हस्तक्षेप गरेको अवस्थामा काम गर्न जो कोहीलाई पनि असजिलो हुन्छ। त्यही भएर मैले पार्टीभित्र असन्तुष्टि राखेको छु। पार्टी सिस्टममा सुधार होस् भनेर चाहेको छु।
राजीनामा होइन, असन्तुष्टिमात्र हो : मेयर सरावगी को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।